Baotian 35 နှစ်ပေါင်းပရိဘောဂစိတ်ကြိုက်အာရုံစိုက်
chaise နှင့်အတူ Chesterfield ဆိုဖာ
ကြော့ခရမ်းရောင်ခေတ်သစ် chaise Lounge ဆိုဖာ
နွေ ဦး ရာသီနှင့် Memory အမြှုပ် Hybrid မွေ့ယာ
အမေရိကန်စတိုင် Living ည့်ခန်းသုံးပရိဘောဂဇိမ်ခံဒီဇိုင်းထည်ထောင့်ဆိုဖာ, Chesterfield ဒီဇိုင်းထည်ချုပ်အိပ်ရာ
အိမ်သုံးပရိဘောဂခေတ်သစ်3ထိုင်ခုံထည်ဆိုဖာအိပ်ရာ
ဟိုတယ်ပရိဘောဂအိတ်ကပ်နွေ ဦး မွေ့ရာဆိုဖာအိပ်ရာ
Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd.
အမှတ် ၃ Chengcai လမ်း, ဂရိတ်မြို့, Shunde ကွဲပြားမှု, ဖိုရှန်မြို့, ဂွမ်ဒေါင်း. တရုတ်
A healthy sleep pattern ensures the next day full of energy esp for working adults and heavy load students. Sleep hygiene isahabitual activity that helps us fall asleep and maintain healthy sleep. ညံ့ဖျင်းသောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသည်အိပ်စက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်. Hence considered most people lack healthy sleep we hope the below small tips useful before you go to bed.
လူတိုင်းသည်ကောင်းမွန်သောအိပ်ရေးအလေ့အထရှိလိုကြသည်, ဒါပေမယ့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, လူတွေရဲ့အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကကျဆင်းနေတယ်. ဒီတော့, အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအချက်များကားအဘယ်နည်း? အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သည်? တကယ်တော့, အိပ်ရေးအရည်အသွေးသည်ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စားသောအလေ့အထတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်, ပတ်ဝန်းကျင်အပါအဝင်, အချိန်, လှုပ်ရှားမှုနှင့်စားသုံးမှု.
ငါတို့အိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာမှာအိပ်သင့်တယ်. အခန်းတိတ်ဆိတ်နေသင့်တယ်, အပူချိန်အတွက်မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်အလယ်အလတ်. အလုပ်ကြောင့်တစ်နေ့တာအတွင်းသာအိပ်နိုင်လျှင်, opaque blinds တွေကိုသုံးပါ, shadows, or curtains. ဒီလမ်း, if the light comes in through the window, မင်းမျက်လုံးမထိရ. ဆိတ်ငြိမ်သောဝန်းကျင်၌အိပ်မရသောသူတို့အဘို့, အိပ်ပျော်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့နူးညံ့တဲ့သီချင်းတွေကိုသင်ဖွင့်နိုင်သည်.
အိပ်ရာသည်အိပ်ရေးဝဝ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. This includes pillow-top mattresses, အမြစ်နှင့်အိပ်ရာ. မွေ့ရာများသည်အထောက်အကူဖြစ်သင့်သည်, အရာပူးတွဲဖိအားကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်. နောက်ကျောနှင့်လည်ပင်းထို့နောက်စနစ်တကျ alignment ကိုဆက်လက်တည်ရှိရမည်ဖြစ်သည်. ခေတ်မီသောမွေ့ရာဒီဇိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်းသည်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖိအားပေးမှုကြားသင့်လျော်သောဟန်ချက်ညီစေရန်ရည်ရွယ်သည်. မွေ့ရာရွေးချယ်ရာတွင်, သင့်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုသာမကသင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပါထည့်စဉ်းစားပါ, နောက်ကျောနာကျင်မှုအပါအဝငျ, လည်ပင်းနာကျင်မှု, အဆစ်, အရက်, apnea အိပ်ပါ, နှင့် fibromyalgia.
ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကို circadian rhythm ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ၂၄ နာရီသံသရာကျွန်ုပ်တို့ထ။ လဲကျသောအခါ, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုပေါ်မူတည်. နာရီပိုင်းအတွင်းအချိန်ဇယားအတော်များများရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေကို ဦး တည်ရာမှာဒေသခံအချိန်နှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းထဲကခဲ့ကြသည်. အချိန်အပြောင်းအလဲကြောင့်ဂျက်လေယာဉ်နောက်ကျပါလိမ့်မယ်. သငျသညျရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တိုင်းဆိုင်းပြောင်းလဲပါက, သင့်ရဲ့အိပ်ချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစတင်ညှိယူပါ.
အိပ်ချိန်မတိုင်မီ ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအကြား, စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်လှုပ်ရှားမှုမှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်သင်အားစတင်အနားယူရန်ခွင့်ပြုသည်. တစ်နေ့တာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ညဘက်တွင်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများကိုလျှော့ချပါ. အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်နာရီဝက်မှတစ်နာရီကြာသော TV ကိုပိတ်ထားပါ, စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပါသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကို browse, အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကိရိယာများကိုမထိပါနှင့်. လိုအပ်ခဲ့လျှင်, နေ့ခင်းပိုင်းတွင်အိပ်မောကျပြီးသင်၏နေ့လည်စာစားခြင်းကိုကန့်သတ်နိုင်သည် 30-45 ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပုံမှန်အိပ်စက်ခြင်းကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်.
အိပ်ရာဝင်ချိန်နှင့်နီးကပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာသည်ကျွန်ုပ်တို့အိပ်ခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်. သငျသညျအိပ်ရာမဝင်မီတစ်နာရီခန့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်လျှင်, ကျေးဇူးပြုပြီးအစာစားပါ, but not suitable for high-calorie foods, အရာသည်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အိပ်ချိန်အချိန်၏အရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်. ကော်ဖီနှင့်အခြားကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်သောအချိုရည်များသည်မနက်ခင်းတွင်ထရန်သင့်တော်သည်, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်သည်, သူတို့အိပ်ရာဝင်သည့်ပထမသုံးနာရီသို့မဟုတ်လေးနာရီအတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းသောမဟုတ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့အိပ်စက်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအချက်များစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်. ဒါပေမယ့်ငါတို့ကအိပ်စက်ခြင်းသန့်ရှင်းမှု၏အချို့သောသော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါ, ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်. ငါတို့အများစုအတွက်, အခြားသူများကထိန်းချုပ်သောအချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့်အတန်းချိန်ဖြစ်သည်. တိုတိုပြောရရင်, အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်အနားယူရန်နှင့်တစ်နေ့တာအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အားနိုးကြားမှုရှိစေရန်, ငါတို့လုပ်နိုင်တာကိုထိန်းချုပ်ပြီးမလုပ်နိုင်တာကိုညှိဖို့လိုတယ်. သေချာပါတယ်,agood mattress will help you sleep well, too. ထို့ကြောင့်, we recommend this model - spring and memory foam hybrid mattress to these who are troubled in sleeping.
For more info pls click here: ဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူ
အမှတ်အသားများ (Tags): Buy sofa set, နွေမွေ့ယာ
အတွင်းထိပါ 24 နာရီ.
Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd. © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒသင်္ဘောပေါ်လစီ